Djibouti Oo Xidhay Xadka Ay Somaliland La Wadaagto | #1Araweelo News Network
Djibouti(ANN)-Xukuumadda Dalka Djibouti ayaa xidhay xadka ay la wadaagto jamhuuriyadda Somaliland muddo cayiman, sida lagu shaaciyay amar kasoo baxay maanta Xukuumadda Dalkaa.
Amarka Digreetada ah ee xukuumadda Djibouti, ayaa kasoo baxay Madaxtooyadda, kaasoo uu ku xaeexanyahay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, waxaana amray Masuuliyiinta Difaaca, arrimaha gudaha iyo Caafimaadka inay fuliyaan amarkaa.
Sida lagu xusay amarka Xayiraada ah, waxa lagu sababeeyay xidhitaanka xadka ay Somaliland la wadaagto Djibouti mid ka dhalatay sababo dhanka Caafimaadka ah.kaddib markii laga helay qaar ka mid ah dadka dhanka Somaliland ka tegey ee galay Dalka Djibouti xannuunka COVID-19.
AKHRI: Somaliland Oo Xaqiijisay In Xumadda COVID-19, Lagu Arkay Deegaamo Ay Mareen Dad Xanbaarsanaa Fayriska
Arrintaa ayaa sababtay in muddo 15 Maalmood oo ka bilaabmay maanta 20 Oct, 2020, la joojiyay isu socodka dadka ee Somaliland iyo Djibouti.
Dadka ka talaabayay xadka Somaliland iyo Djibouti oo baadhitaano caafimaad la mariyay, ayaa laga helay xannuunka COVID-19, iyadoo tiro labaataneeyo ah oo ka tegey dhanka Somaliland laga helay.